Forex သင်တန်း ဇူလိုင်လ 2022 | အကောင်းဆုံး Forex ပညာရေး - ကုန်သွယ်မှု2ခု လေ့လာပါ။
Professional Forex Trader တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါ
2 ကုန်သွယ်ရေး Forex သင်တန်းလေ့လာပါ
2 Trade Forex Course ကို အခမဲ့ လေ့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တွဲဖက်ပွဲစားများထဲမှ တစ်ဦးနှင့် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး အနည်းဆုံး အပ်ငွေ- 250 USD ပြုလုပ်ပါ။ အီးမေးလ် [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] ၀ င်ရောက်ရန်အကောင့်မှရန်ပုံငွေပုံတစ်ပုံဖြင့်ကြည့်ပါ။
ရုံ£ 11 များအတွက် 99 အခန်းကြီးအားလုံးသော့ဖွင့်!
သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် desktop မှသင်ယူပါ။
တစ်ခုရယူပါ တစ်နှစ်ပရီမီယံအကောင့် အလကား!
သင်၏အကျိုးစီးပွားကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည့် FCA ၏ FX / CFD ပွဲစား၊ eToro နှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ။ Learn2Trade VIP Forex Signals များကိုတစ်နှစ်အခမဲ့ရယူပါ။
CFD များသည်ရှုပ်ထွေးသောလက်နက်ကိရိယာများဖြစ်ပြီး၊ သြဇာကြောင့်ပိုက်ဆံလျင်မြန်စွာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ လက်လီရောင်းချသူများ၏အကောင့် ၇၀.၁၆% သည် CFDs / Spread အလောင်းအစားများကိုဤပံ့ပိုးသူနှင့်ရောင်းသည့်အခါပိုက်ဆံဆုံးရှုံးသည်။ CFDs / Spread အလောင်းအစားသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ပြီးသင်၏ငွေဆုံးရှုံးမှုကိုစွန့်လွှတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသင်စဉ်းစားသင့်သည်။
Learn2Trade Forex သင်တန်းကိုစတင်ပါ။
ဥပမာများနှင့်အပိုဆုကြေးများစွာကိုဖော်ရွေစွာ၊ နားလည်ရလွယ်ကူသော၊ နားလည်လွယ်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းတွင်သင် Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်။ သင်ခန်းစာ ၁၁ ခုတွင်ရှိသောဘဏ္theာရေးစျေးကွက်၏အားသာချက်ကိုရယူပြီး Forex ကိုပညာရှင်တစ် ဦး အနေနှင့်မည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Forex trading သင်တန်းကိုသင်ယူခြင်းအားဖြင့် -
Learn2ကုန်သွယ်ရေးကုန်သွယ်ရေးသင်တန်းအတွက်ပြင်ဆင်မှု
Forex စျေးကွက်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးစျေးကွက် (တူရိယာများဟုခေါ်သည်) ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်သည်ငွေကြေး၏တန်ဖိုးကိုအခြားငွေကြေးတန်ဖိုး (ဥပမာ $ 1 = £ 0.66) ဖြင့်တိုင်းတာသည်။
Learn2ကုန်သွယ်ရေးပထမအဆင့် - အခြေခံဝေါဟာရ
ဗဟုသုတရရန်ကုန်သွယ်ရေးဝေါဟာရကိုလေ့လာခြင်း (၂) ကိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဝေါဟာရသည်ငွေကြေးဈေးနှုန်းများကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်အရေးကြီးသည်။
Forex Trading အတွက်အချိန်နှင့်နေရာကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ
စျေးကွက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ Forex ကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ခရီးဆက်သွားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နက်ရှိုင်းသောရေထဲသို့မကူးမီကျွန်ုပ်တို့၏ခြေကို ဦး စွာရေလောင်း။ အပူချိန်နှင့်အညီကျင့်သုံးပြီးအောက်ပါ Forex trading အသုံးအနှုန်းများကိုအာရုံစိုက်ပါ။
လေ့လာရန်2ကုန်သွယ်ရေးအတွက်တပ်ဆင်ထားပါ
ယခုသင်သည်သင်၏ခြေချောင်းများစိုစွတ်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရေကူးသင်ခန်းစာများကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းခုန်ကြပါစို့။ အောင်မြင်သော Learn2Trade ကုန်သည်ဖြစ်ရန်သင်လိုအပ်သောအခြေခံကိရိယာများကိုစတင်ပေးပါမည်။
အခြေခံလေ့လာရန်2ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြေခံကျသောချဉ်းကပ်မှုသည်နည်းပညာထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်မှ Warren Buffet အထိကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးကုန်သည်အချို့ကသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှရရှိသည်ဟုဝန်ခံကြသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ
အချိန်ကုန်ဆုံးသောအရာများထဲကို ၀ င်ပြီးနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလေ့လာရန်အချိန်အများဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အခန်း (၆) တွင်လူကြိုက်အများဆုံး Forex Trading မဟာဗျူဟာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပါမည်။
နောက်အခန်းနှစ်ခန်းတွင်သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်မိတ်ဆက်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတွင်သူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများရှိပြီး Forex ကုန်သည်များလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ toolbox တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ ဤကိရိယာများသည်ထိရောက်သော၊ ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။
မစ္စတာဖီဘိုနာချီကိုတွေ့ပြီးသည့်နောက်အခြားလူကြိုက်များသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများကိုသိရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ သင်လေ့လာမည့်အညွှန်းကိန်းများသည်ဖော်မြူလာများနှင့်သင်္ချာဆိုင်ရာကိရိယာများဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းများသည်တစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှညွှန်းကိန်းများသည်စျေးနှုန်းများနှင့်စနစ်များအတွင်းသို့ရောက်ရှိရန်ကူညီသည်။
ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများအတွက်6လူသတ်သမားပေါင်းစပ်
အခန်း ၉ တွင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရန်သင်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
အခန်း ၁၀ - စွန့်စားမှုနှင့်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုအမြင့်ဆုံးတိုးမြှင့်နိုင်မည့်နည်းလမ်းနှင့်သင်၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်၊ Forex trading ၏အရေးကြီးဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့်သင့်လျော်သောငွေနှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းဆွေးနွေးပါမည်။ ဤအရာသည်သင်၏စွန့်စားမှုကိုလျော့ပါးစေပြီးသင့်အားအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေနိုင်သည်။
2 ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်နွယ်သောကုန်သွယ်ရေးနှင့် MetaTrader နှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုလေ့လာပါ
အခန်း 11 တွင် – စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများနှင့် ဆက်စပ်ကုန်သွယ်မှု2ကိုလေ့လာပါ နှင့် MetaTrader ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု2ကိုလေ့လာရန် ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်အတွက် စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကုန်စည်များအကြား ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာပါ။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် MetaTrader ပလပ်ဖောင်းကို မည်သို့ကျွမ်းကျင်ရမည်ကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Forex Course & Forex – 'FX' ဟု ရည်ညွှန်းပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အကြီးဆုံးနှင့် အရည် အချင်းအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် နေ့ရောညပါ 24/7 ကုန်သွယ်မှုငွေကြေးများ ပါဝင်သည်။ ကုန်သည်များ၊ ဘဏ်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ခရီးသွားများပင် အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူများနှင့်အတူ - Forex သည် ငွေကြေးတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုကို လဲလှယ်ခြင်း ပါဝင်သည်။
ငွေကြေးနှင့်လဲလှယ်ရေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကဲ့သို့ပင်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကုန်သည်များသည်အမြတ်အစွန်း (သို့) စောင်ရန်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤငွေကြေးများကို ၀ ယ ်၍ ရောင်းနေကြသည်။ ဤစျေးကွက်များ၌ဆုံးဖြတ်ထားသော ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားသည်ငွေလဲနှုန်းကိုသတ်မှတ်သည်။
သင် Forex အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူအသစ်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်ဖြစ်စေ အသိပညာသည် စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Learn2Trade မှ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့သည် အသုံးဝင်သော အချက်အလက်အပြည့်အစုံဖြင့် လမ်းညွှန်ချက်ကို စုစည်းထားပါသည်။
ဒီ Forex သင်တန်းမှာငါတို့ကုန်သွယ်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်။ သင်သိသင့်သည်အရာအားလုံးအားဖြင့်သင်တို့ကို run သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်အခြေခံဝေါဟာရများ၊ နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဇယားဖတ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာများ၊
Eightcap ကို အခုပဲ သွားကြည့်ပါ။
Forex သည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း (NASDAQ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ FX ဟုရည်ညွှန်းသော Forex သည်ငွေကြေး (၂) ခုအတွက်လဲလှယ်မှုနှုန်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ မည်သူမဆို ၀ င် ရောက်၍ ဤကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်တွင်အမြတ်အစွန်းရရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ဘဏ်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်ခြားသောနိုင်ငံခြားငွေများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်သောကြောင့် Forex trading သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များအကြားလူကြိုက်များလာသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ တစ်နေ့လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံခန့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပြီး Forex စျေးကွက်သည်နှေးကွေးနေသည်ဟုမတွေ့ရပေ။
ဤကုန်သွယ်ရေးမြင်ကွင်းသည်နိုင်ငံခြားငွေကြေးများအားခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်လဲလှယ်ခြင်း၊ စွန့်စားရမှုများကိုကာကွယ်ရန်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်သည့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဓိက ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ရာထူးတစ်ခုကို ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ သင့်အတွက် ကုန်သွယ်မှုကို စွန့်စားရတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပိတ်မယ့် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုကို ထားရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Forex စျေးကွက်၏အဓိကရလာဒ်မှာငွေရှာရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ငွေကြေးရောင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်တိုအတွင်းမည်သည့်ဖလှယ်မှုသည်မည်သည့်လမ်းဖြင့်မည်သည့်လမ်းကြောင်းရွေ့ပြောင်းသွားသည်ကိုသင်မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းသောအခါသင်ဤပန်းတိုင်သို့ရောက်လိမ့်မည်။
နောက်လာမည့်ဤ Forex သင်တန်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အာကာသအတွင်းအသုံးအများဆုံးအသုံးအနှုန်းများနှင့်အသုံးအနှုန်းများကို ဖြတ်၍ သွားမည်။
သင်ကြားမှု2ကုန်သွယ်ရေးမှကျွန်ုပ်တို့ Forex ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့်လေးစားခြင်းအတွက်ဗန်းစကားအားဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အောက်တွင် သင်ကျွမ်းကျင်ရန် လိုအပ်သော အရေးကြီးဆုံး ဝေါဟာရများစာရင်းကို အောက်တွင် တွေ့ရလိမ့်မည်။
အမှန်မှာ၊ အရည်အများဆုံးဟု ယူဆထားသော ငွေကြေးအတွဲများသည် လူကြိုက်အများဆုံး (ထောက်ပံ့မှုနှင့် ဝယ်လိုအား) ဖြစ်သည့် ငွေကြေးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို 'အဓိကအတွဲများ' ဟုခေါ်သည်။ ကုန်သည်များ၊ ဘဏ်များ၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တင်သွင်းသူများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ဤအရေးကြီးသော ထောက်ပံ့ရေးနှင့် ဝယ်လိုအားကို အမှန်တကယ် ဖန်တီးပေးသည်။
အရည်သုံးငွေကြေးအတွဲ၏ စံနမူနာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည်။ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ. တကယ်တော့၊ ဒါက forex စျေးကွက်မှာ အရည်အချင်းအများဆုံးငွေကြေးအတွဲဖြစ်တယ်လို့ ကျယ်ပြန့်စွာယုံကြည်ကြပါတယ်။ တစ်ဖန် ၎င်းသည် ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား ကျဆင်းသွားပြီး၊ ၎င်းသည် အရောင်းအ၀ယ်အများဆုံး ငွေကြေးအတွဲဖြစ်သည်။
EUR / USD သည်ကုန်သည်များကိုကာလတိုကုန်သွယ်မှုအလားအလာအမျိုးမျိုးပေးသည်။ ဒါကကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် pips နေ့စဥ်နေ့တိုင်း ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အထင်ကြီးလောက်စရာ ပျမ်းမျှ 90 မှ 120 pips အကြားတွင်၊ ၎င်းကို အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရည်အချင်းရှိသောအတွဲဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိမြင်နိုင်သည်။
USD/JPY- အမေရိကန် ဒေါ်လာ/ဂျပန်ယန်း။
USD/CAD- အမေရိကန် ဒေါ်လာ/ ကနေဒါဒေါ်လာ။
USD/CHF- အမေရိကန် ဒေါ်လာ/ဆွဇ်ဖရန့်။
အနည်းငယ်သာအသုံးများသော 'ထူးခြားဆန်းပြားသော' ငွေကြေးအတွဲများနှင့်ပတ်သက်သောဥပမာအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်
EUR / GBP: ယူရို / Sterling ။
NZD / JPY: နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ / ဂျပန်ယန်း။
GBP / JPY - ဂရိတ်ဗြိတိသျှပေါင်၊ ဂျပန်ယန်း။
EUR / AUD: ယူရို၊ Australianစတြေးလျဒေါ်လာ။
GBP / CAD: ဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင် / ကနေဒါဒေါ်လာ။
AUD/HKD- သြစတြေးလျဒေါ်လာ/ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ။
ဒါတောင် ဥပမာ၊ AUD / NZD ကုန်သွယ်နေ့တွင် pips များစွာကို ရွှေ့လေ့မရှိပေ။ ထူးခြားဆန်းပြားသော ငွေကြေးအတွဲများနှင့် သင့်ကိုယ်သင် ရင်းနှီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းက အကျိုးရှိဆဲဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ သင်ပိုသိလေလေ သင်ပိုကောင်းလာလေလေ သင်ပြင်ဆင်ထားလေလေဖြစ်သည်- သင်သည် အသေးအဖွဲ သို့မဟုတ် ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများကို ပေးဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
အဆိုပါပိုက်သည် Forex trading ဈေးကွက်အတွင်းငွေကြေး pair တစုံ၏စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သည့်အနိမ့်ဆုံးပမာဏကိုကိုယ်စားပြုသည်။ 'percent in point' ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော pip သည် forex ငွေကြေးအတွဲ၌မှတ်သားထားသောမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုပြသသည်။
ငွေကြေးအတွဲ၏ကုန်ကျစရိတ်ရှိအခြေခံယူနစ်သည်အဓိကအားဖြင့်ပိုက်ဆန်ဖြစ်သောကြောင့် ၀.၀၀၀0.0001 သည်စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ဥပမာဆိုရရင် လေလံဈေးတက်ဘို့ EUR / GBP ငွေကြေးအတွဲသည် 1.15701 မှ 1.15702 သို့ပြောင်းသွားသည်၊ ၎င်းသည် ခြားနားချက်တစ်ခု၏ pip ဖြစ်သည်ကို ကုန်သည်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်အား ပြသသည်။
သင် Forex ကုန်သွယ်မှု၏အခြေခံဆုပ်ကိုင်ထားလျှင်ပင်, သင်သံသယကြားသိကြလိမ့်မည် ပျံ့နှံ့။ ပြန့်ပွားမှုနှင့်မည်သို့ Forex ဈေးကွက်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ခြင်းသည်ရေရှည်တွင်အမြတ်အစွန်းရရန်အမှန်ပင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောငွေကြေးအတွဲများသည်ပိုမိုတင်းကျပ်သောပျံ့နှံ့မှုရှိလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံအသုံးအများဆုံးငွေကြေးအတွဲများသည်ပိုက်တစ်ခုထက် ပို၍ ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
အဆိုပါပြန့်ပွားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားမှာ, ဝယ်ယူကုန်ကျစရိတ်နှင့်ငွေကြေး pair တစုံ၏ရောင်းစျေးနှုန်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကုန်ကျစရိတ်များသည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့တစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
margin အကြောင်း မပြောဘဲ forex trading course page တစ်ခု ဖန်တီး၍မရပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ margin ဟာ Forex trading ရဲ့ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ရာထူးတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ငွေပမာဏကိုမာဂျင်ဟုခေါ်သည်။ ဤသည်မှာကုန်သည်များသည်၎င်းတို့၏စျေးကွက်အလားအလာများကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ထားစဉ်သင်၏အနားယူမှုကို Forex ပွဲစားမှကာကွယ်လိမ့်မည်။ အမှန်ကတော့, margin တစ်ခုငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်အစား, တစ် ဦး အနိမ့်ငွေပေးချေမှုကဲ့သို့ဖြစ်၏။
Forex ပွဲစားများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား လွှမ်းမိုးနိုင်စေရန် မကြာခဏ ပေးလိမ့်မည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ forex trader သည် မြင့်မားသော volumes များဖြင့် ရောင်းဝယ်နိုင်စေရန် မြင့်မားသော margin လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အမြတ်အစွန်းကို ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
များစွာသော Forex ကုန်သည်များအဘို့, သူတို့ရဲ့ Forex ပွဲစားကပေးသောသြဇာ tools တွေကိုစျေးကွက်ရာထူးတိုးမြှင့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အရင်းအနှီးကို အများအားဖြင့် လွှမ်းမိုးမှုပုံစံဖြင့် တင်ပြကြပြီး၊ ထို့ကြောင့် Forex ပွဲစားများသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို ပေးဆောင်နိုင်သော ကုန်သွယ်မှုအရေအတွက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်အရောင်းအဝယ်အားသာချက်ကိုယူပြီးနေစဉ်သင်အရောင်းအဝယ်မပြုမီ, သင်တစ် ဦး Forex ပွဲစားနှင့်အတူအနားသတ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရာထူးအရွယ်အစားနှင့် မေးခွန်းထုတ်သော ပွဲစားပေါ် မူတည်၍ leverage သည် 200:1 အထိ မြင့်မားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်၊ ယူကေနှင့်ဥရောပလက်လီရောင်းချသူများသည် ESMA စည်းမျဉ်းများအတိုင်း 1:30 အထိ ကန့်သတ်ထားသည်။
Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် လွှမ်းမိုးမှုနမူနာ ၃ ခုကို စုစည်းထားသည်။
ဥပမာအား 1: အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုသြဇာသက်ရောက်မှု ၁:၁၀ ရှိပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမြတ်အစွန်းကိုဒေါ်လာ ၄၀ ရရှိလျှင်၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၄၀၀ အထိတိုးလိမ့်မည်။
ဥပမာအား 2: သင်၏သြဇာသည် ၁:၂၀ ရှိပြီးသင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရှိလျှင်သင်၏ငွေကြေးအတွဲတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ နေရာကိုသင်လဲနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးကို ၂၀ ဆတိုးမြှင့်သည်။
ဥပမာအား 3: GBP / USD ကိုဒေါ်လာ ၅၀၀ နဲ့အစုရှယ်ယာ ၁.၃၀ နဲ့ရှည်လျားတဲ့အနေအထားရှိရင်သင့်ရဲ့အမြတ်နဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ၃၀x တိုးလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အမြတ် ၁၀% ရလျှင်သင်၏အမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၅၀ မှ ၅၀၀ အထိဖြစ်လိမ့်မည်။
အလင်းနှင့်အမှောင်ကဲ့သို့ပင်အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ အမြဲတမ်းသတိထားပါ၊ သြဇာသည်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းသင်သတိမပြုမိလျှင်ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
အကယ်၍ သင့်အကောင့်သည် သုညအောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါက၊ အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်မူဝါဒကို တောင်းဆိုရန် သင်၏ Forex ပွဲစားထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင်ပထမနေရာ၌ အပ်နှံထားသည်ထက် ပိုငွေမဆုံးရှုံးကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ကုန်သည်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်၏ Forex ပွဲစားနှင့် အကြွေးမတင်စေရန် စိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာ အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားအများစုသည် အကောင့်ဖွင့်ခြင်းမပြုမီ ၎င်းကို စစ်ဆေးသင့်သည်ဆိုသော်ငြား အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်ကို အလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် ESMA ၏ပေးဆောင်မှုအတွင်းကျသော ပွဲစားများနှင့် ဤကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။
Forex Trading: သာမန်အားဖြင့်အသုံးပြုသောအမှာစာများ
ဤ Forex သင်တန်း၏ဤအပိုင်းတွင်စျေးကွက်အမိန့်များအကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုမှုအချို့ကိုရှင်းပြပြီးတစ်ခုစီကိုရှင်းပြသည်။ ဤသည်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်၊ ဤအမိန့်များသည်သင်၏ကိုယ်စားရာထူးများကိုသူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်သင်၏အမိန့်ကိုရွေးချယ်သောသင်၏ပွဲစားသို့လွှဲပေးလိမ့်မည်။
Forex သင်တန်း- အမှာစာများ ဝယ်ရောင်း
အကယ်၍ ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏စျေးနှုန်းကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်ပါကသင်သည်“ တိုတောင်းသွားလိမ့်မည်” အကြောင်းပြချက်မှာပစ္စည်းကိုအနိမ့်ဆုံးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ယူခြင်းမှအကျိုးခံစားရရန်သင်“ ရောင်းရန်အမိန့်” ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အလားတူစွာ၊ အတွဲတစ်ခု၏စျေးနှုန်းများမြင့်တက်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ သင်သည် 'long order' ဟုလူသိများသော 'buy order' ကိုထည့်ပါ။
ငွေကြေးစုံစျေးနှုန်းကိုကြည့်ရှုရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်းမှာ၎င်းသည်ဒုတိယငွေကြေးတန်ဖိုးနှင့်သင်ပထမငွေကြေးကိုမည်မျှလဲလှယ်နိုင်သည်ကို အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ငွေကြေးအတွဲ၏စျေးနှုန်းသည်လက်ရှိငွေလဲလှယ်နှုန်း (အတွဲတစ်ခုအနေဖြင့်) အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ USD / USD ကို ၁.၁၄ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်လျှင် ၁ ဒေါ်လာလျှင် ၁.၁၄ ဒေါ်လာရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Forex ပွဲစားသည် သင့်အား ထိုနံပါတ်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီပေါ်အခြေခံ၍ ဝယ်ယူမှု (အမှာစာ) နှင့် အရောင်းစျေးနှုန်း (ရောင်းအမှာစာ) ကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းနှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်မှာ ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်သည်။
ယခုသင်သည် အဓိကဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကို ဝယ်ယူပြီးပြီ ဆိုကြပါစို့ GBP / JPY ရှည်လျားသော အနေအထားတွင် ရှိနေရန် ရွေးချယ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ GBP သည် JPY နှင့် ယှဉ်လျှင် GBP တန်ဖိုးတက်မည်ဟု သင်ခန့်မှန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် GBP / JPY အတွဲကိုနှစ်ကြိမ် ၀ ယ်ယူခဲ့လျှင်သင်၏တူညီသောငွေကြေးအတွဲ (USD / JPY) တွင်ရှည်သောရာထူးနှစ်ခုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီစုံတွဲရဲ့အခြေခံငွေကြေးဟာ GBP ဖြစ်ပြီး၊ အနေအထားရဲ့အရွယ်အစားက ၂ စာရေး (ကန်ထရိုက်များ) ဖြစ်ပြီး၊ ဦး တည်ချက်က 'ရှည်' တယ်။
ဒါ့အပြင်ကန့်သတ် - ဝယ်အမိန့်ဟုခေါ်သည်, ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းမှာစျေးကွက်ဝင်ချင်သည်ဟုပြောအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ GBP / USD ကို ၁.၃၀ နဲ့ရောင်းချရင် ၁.၂၉ ထိစျေးကွက်ထဲ ၀ င်ချင်ရင်ကန့်သတ်ချက်အမိန့်ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သင်၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းစတင်မှသာလျှင်အမှာစာသည်တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။ ထိုအချိန်အထိ၎င်းသည် 'ဆိုင်းငံ့' နေဆဲဖြစ်သည်။
ယူ - အမြတ်ယူမှုသည်သင်၏ Forex ပွဲစားအားသင်စျေးနှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ထားသောအမြတ်အစွန်းအထိရောက်သည်နှင့်သင်ကုန်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်ရာထူးကိုပိတ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟုပြောသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်အခြေခံများသည် Stop-loss order နှင့်တူညီသည်။ သို့သော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။
Forex သင်တန်း- ဘုံ Forex ဇယားများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex သင်တန်း၏ ဤအပိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးအများဆုံးဇယားများကို စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။ ကုန်သည်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများစွာကို ကျေးဇူးတင်လျက် အမြတ်အစွန်းရှာရန် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးမြှင့်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကုန်သည်များသည်ကြီးမားသောငွေကြေးအတွဲအမျိုးမျိုးအပြင်အခြားငွေကြေးစျေးကွက်များကိုလေ့လာရန်နှင့်ဆန်းစစ်ရန်အတွက် Forex ဇယားများကိုနေ့စဉ်အခြေခံသုံးကြသည်။ w အောက်e သည် Forex trading တွင် အသုံးအများဆုံးဇယားများစာရင်းကို စုစည်းထားပြီး တစ်ခုချင်းစီ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ရှင်းပြထားပါသည်။
Forex သင်တန်း- လိုင်းဇယား
လိုင်းဇယားသည် အရိုးရှင်းဆုံးဇယားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် အသစ်စက်စက် ကုန်သည်ဖြစ်ပါက ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော အစမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ပိုမိုကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာကိုစစ်ဆေးခြင်းမှကြွလာသောအခါတွင်၎င်းသည်ကုန်သည်များအတွက်လေ့လာရန်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းဇယား၏အခြေခံပုံစံသည်၎င်းကိုလူကြိုက်များစေသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသောစတိုင်ကြောင့်ကုန်သည်များသည်စျေးကွက်၏“ ဆူညံသံများ” ကိုဖြတ်တောက်နိုင်ပြီးရိုးရှင်းသောအချက်အလက်များကိုသာအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာလိုင်းဇယားများသည်ဘားဇယားများနှင့်မီးခုံဇယားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ ဥပမာအနေနှင့်၊ နောက်ဆုံးကာလသည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပါအ ၀ င်အချိန်ကာလတစ်ခုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူလိုင်းဇယားသည်အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးသောမျဉ်းကြောင်းကိုပြသသည်၊ ဤသည်တစ်ခုချင်းစီကိုကာလ၏ပိတ်ပွဲအတူတကွချိတ်ဆက်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြနေသည့်နေ့စဉ်လိုင်းဇယားကိုကြည့်သောအခါ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု GBP/AUS တွင် ပြထားသည့် မျဉ်းသည် ထိုအတွဲရှိ စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းကို ရလဒ်များနှင့် နေ့စဉ် ဆုံးရှုံးနေသော ဈေးနှုန်းများကို ချိတ်ဆက်ထားသော လိုင်းဖြင့် ပြသထားသည်။ မည်သည့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော Forex သင်တန်းမဆိုသင်ပြောသကဲ့သို့အတိုင်းစျေးနှုန်းဇယားများသည်အလုပ်များသောစျေးကွက်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုဆန်းစစ်လိုသူများအတွက်အသုံးဝင်သောစစ်ထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
OHLC (ပွင့်လင်း၊ အမြင့်၊ အနိမ့်၊ အနီး)
ကုန်သည်များအတွက်အခြားအထောက်အကူပြုဇယားတစ်ခုရှိသော်လည်း OHLC သည်လိုင်းဇယားနှင့်ကွဲပြားသည်။ အဓိကအားဖြင့်၎င်းသည်ဘားပြဇယားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတွဲ၏အဖွင့်နှင့်အနီးကပ်စျေးနှုန်း၊ အမြင့်နှင့်အနိမ့်စသည့်အချက်အလက်များအားပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ OHLC ဘားဇယားသည်မကောင်းသောသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သည့်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအမှန်တကယ်လေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နာရီသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလုံးဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌သာလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
သင် OHLC ဇယားတွင်သင်ကြည့်နေသောဘားတစ်ခုစီသည်အချိန်ကာလကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်နေ့စဉ်ဇယားကိုကြည့်နေပါကဘားတစ်ခုစီသည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့အပြည့်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးထိုအချိန်အတွင်းမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုမဆိုအာရုံစိုက်သွားလိမ့်မည်။
OHLC ကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ကူညီပေးသင့်သော အချက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းထားပါသည်။
ဘား၏ဘယ်ဘက်ရှိ dash သည်အဖွင့်ဈေးကိုဖော်ပြသည်။
ဝယ်သူ (သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်ဘား) သည် အဖွင့်စျေးနှုန်းသည် အပိတ်စျေးနှုန်းထက် ပိုကြောင်း သရုပ်ဖော်သည်။
ရောင်းသူဘား (သို့မဟုတ် အနီရောင်ဘား) သည် အဖွင့်စျေးနှုန်းသည် အပိတ်စျေးနှုန်းထက် လျော့နည်းကြောင်း သရုပ်ဖော်သည်။
ကုန်သည်များသည်မည်သည့် ဦး တည်ချက်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုသွားမည်ကိုလေ့လာနေသည့်အခါ OHLC သည်ပိုမိုရှင်းလင်းသောပုံရိပ်ရရှိရန်အလွန်အထောက်အကူပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Forex သင်တန်း- Candlestick ဇယား
၁၇၀၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်ဂျပန်ဆန်ကုန်သည်များကပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည့်ဖယောင်းတိုင်ဇယားသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကုန်သည်များနှင့်အတူရေပန်းစားသည်။ ဆီမီးခုံဇယားသည် လွန်ခဲ့သည့်ခဏက ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သော OHLC ဇယားနှင့် အလွန်ဆင်တူသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကုန်သည်များသည် တိကျသောအချိန်ဘောင်တစ်ခုအတွင်း အဖွင့်၊ အပိတ်၊ အနိမ့်နှင့် မြင့်မားသောတန်ဖိုးများကို ဝင်ရောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖယောင်းတိုင်ဇယား၏စျေးနှုန်းသက်ရောက်မှုပုံစံများနှင့်မျက်စိကြည့်မြင်လွယ်ခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းသည် Forex ကုန်သည်များအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။
သင်သည် 'စျေးနှုန်းဖယောင်းတိုင်' ပေါ်တွင်ကွဲပြားသောအချက်သုံးချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဖွင့ ်. : ၎င်းသည်ဖယောင်းတိုင်၏ကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြသည်။
မီးစာ: အရိပ်အဖြစ်လည်းရည်ညွှန်း, ထိုမီးစာသတ်သတ်မှတ်မှတ်အချိန်အပိုင်းအခြားများအတွက်စျေးနှုန်းအစွန်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါမီးစာစျေးကွက်အရှိန်အဟုန်ဖော်ထုတ်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုစီသည်သင်ရွေးချယ်သောအချိန်အပိုင်းအခြားအတွက်စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နေ့စဉ်ဇယားတစ်ခုကိုလေ့လာသည့်အခါတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုစီသည်အနီးကပ်၊
မမေ့ပါနှင့်၊ ကုန်သည်များအတွက် ဤဇယားများကို ချုပ်ကိုင်ကာ ၎င်းတို့ထဲမှ အမှန်တကယ် အကျိုးအများဆုံးရရန် နည်းလမ်းကောင်းမှာ သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖြင့် စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏ပွဲစားများမှတစ်ဆင့် Forex demo အကောင့်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားကျဆင်း။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်သောငွေဖြင့်ကုန်သွယ်ခြင်းမပြုမီသင်လေ့ကျင့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် Forex လောကတွင်စတင်နေပြီဆိုလျှင်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ၏ကောင်းကျိုးများကိုလေ့လာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်သူမျှမကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာနောက်တစ်နေ့ထက်သာ။ ကောင်း၏, ဒါကြောင့်သင်နှင့်သင်၏ရေရှည်ဘဏ္goalsာရေးရည်မှန်းချက်များအတွက်ဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွက်ဆဖို့လိုပါတယ်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးအသုံးများသော Forex Trading မဟာဗျူဟာအချို့ကိုစာရင်းပြုစုပါ။
၎င်းကိုအလယ်အလတ်ကာလမဟာဗျူဟာ (သို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်နည်း) အဖြစ်လူသိများသည်။ Swing ကုန်သွယ် စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ပို၍ ကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာကိုအာရုံစိုက်သည်။ အချို့ကုန်သည်များသည်လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းကို ၄ င်းတို့၏လက်ရှိနေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Swing Trading သည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုတစ်ရက်လျှင်ရက်ပေါင်းများစွာရက်သတ္တပတ်များစွာဖွင့်နိုင်သည်။
တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, Forex ဦး ရေပြား ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအားတစ်ခုအနေဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်လိုသောကုန်သည်များကကုန်သွယ်မှုနေ့တွင်စျေးနှုန်းသေးငယ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ဦး ရေပြားတွင်စက္ကန့်ပိုင်းသို့မဟုတ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကုန်သွယ်မှုများ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းများပါဝင်သည်။ ဤကဲ့သို့ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာသည်ကုန်သည်များအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေရန်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိနိုင်စေသည်။
တစ်နေ့တွင်းကုန်သွယ်မှုသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သမ္မာသတိရှိရှိချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁-၄ နာရီစျေးနှုန်းများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးဖွင့်လှစ်ထားသောအချိန်တိုတောင်းသောကြောင့်၎င်းသည်အစပြုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောကုန်သွယ်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။ တစ်နေ့တွင်းကုန်သွယ်မှုသည်ကုန်သည်များအားဝင်ပေါက်နှင့်ရပ်နားရန်ဆုံးရှုံးမှုနည်းဗျူဟာများကိုလည်းပေးပြီးအန္တရာယ်နည်းပါးသည်ဟုယူဆကြသည်။
Forex သင်တန်း- Forex Trading Platforms
သင်သည်သင်၏အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုမှ Forex ကုန်သွယ်လိုပါကသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော forex trading platform ကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်စရာရာပေါင်းများစွာရှိသဖြင့်သင့်တော်သောပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသုတေသနပြုရန်အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏ Forex ပွဲစားကို အပြည့်အဝယုံကြည်ရန် သင်၏ကုန်သွယ်ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက် အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ သင်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်လိုသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်တွေ့ရှိသောအခါအဓိကအချက်အချို့နှင့်သင်ပျော်ရွှင်နေကြောင်းစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
Forex စျေးကွက် (24/7) နှင့်ကိုက်ညီသည့်ဖွင့်ချိန်။
အကယ်၍ သင်၏ Forex ပွဲစားသည် အထက်ဖော်ပြပါ ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို (သင်ယုံကြည်သည့်ပုံစံအတိုင်း) ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုပါက၊ ၎င်းသည် သင်၏ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းသစ်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အကျိုးရှိစွာ ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Forex ပွဲစားအများစုသည် သင့်အကောင့်ကို လွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ကိုယ်စား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် သင့်ပွဲစားကို တောင်းဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။ သင်သည်မည်သည့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုမဆိုလျင်မြန်စွာနှင့်ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ပေါ်လာသည့်အခါနှင့်ဖွင့်ထားသည့်ရာထူးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်သင့်သည်။
Forex သင်တန်း- နည်းပညာပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အများဆုံးဂုဏ်သတင်းကျော်စောသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အတွက်သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများစွာရှိလိမ့်မည်။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်မြှုပ်နှံထားသောညွှန်းကိန်းများရှိသည်ဟုသင်တွေ့ရှိရပြီးအခြားသူများကမူလေ့လာရန်အတွက်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပွဲစားတစ်ယောက်ရဲ့အင်္ဂါရပ်များများလေလေပိုကောင်းလေပဲ။ ဒါပေမယ့်၊ သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုပုံစံပေါ်မူတည်တယ်။
လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးသတင်းများ၊ စျေးနှုန်းဇယားများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သာ သင်၏ကုန်သွယ်မှုခရီးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် များစွာပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးပါမည်။ မြန်ဆန်ပြီး ရိုးရှင်းသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခု၏ ဥပမာမှာ Meta Trader 4/5 ဖြစ်သည်။ Forex ပွဲစားအများအပြားသည် ဤပလပ်ဖောင်းများကို ကမ်းလှမ်းသည်၊ အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဇယားကွက်များ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ဒေတာသတင်းဖြစ်စေ၊ ဤကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းများသည် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် လူကြိုက်များသည်။
အမြဲတမ်းလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော Forex ပွဲစားကိုအမြဲရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလုံလောက်စွာအကာအကွယ်ပေးသည့်အတွက်စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုပေးပါလိမ့်မည်။
ဤ Forex သင်တန်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့သည် သင့်အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော Forex ပွဲစားများစာရင်းကို စုစည်းထားပါသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ မေးခွန်းထုတ်သည့်ပွဲစားက လိုင်စင်ရထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ UK ကဲ့သို့ ကျော်ကြားသော အဖွဲ့အစည်းများ ကို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်သက်သည်။ FCAဩစတေးလျနိုင်ငံ၊ ASICဒါမှမဟုတ် CySEC ဆိုက်ပရပ်စ်၌တည်၏။
Forex သင်တန်း- နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ
ဤ Forex သင်တန်း၏အပိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအသုံးပြုသည့်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအချို့ကိုဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ဤအချက်များကသင့်အားအဆင့်မြင့်ဇယားဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုပြီးနောက်ဆုံးတွင် - ငွေကြေးတန်ဖိုးတစ်ခုသည်မည်သည့်လမ်းကိုရေတိုတွင်ရွေ့လျားနိုင်သည်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
SMA (ရိုးရှင်းသော Moving ပျမ်းမျှ)
ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားပျမ်းမျှ (SMA) သည် Forex ကုန်သည်များကြားတွင်ကျော်ကြားသည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည် လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးထက် နှေးကွေးသောနှုန်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် နောက်ကျနေသောညွှန်ပြချက်အဖြစ် မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ SMA ကုန်သွယ်မှုညွှန်းကိန်းသည်အခြားနည်းဗျူဟာများထက်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏သမိုင်းကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်၊
ကာလတိုရွေ့လျားပျမ်းမျှနှုန်းသည် ရေရှည်ရွေ့လျားပျမ်းမျှထက် ကျော်လွန်နေပါက၊ ၎င်းသည် လတ်တလောစျေးနှုန်းသည် မူလစျေးနှုန်းထက် ပိုမိုမြင့်မားနေသည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင် ကုန်းတက်လမ်းကြောင်း လက္ခဏာကြောင့် ၎င်းကို ဝယ်ရန်အချက်ပြမှုအဖြစ် သင်ယူနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားရင်၊ ဒါက အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရာမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
Forex သင်တန်း- Donchian Channel
Donchian ရုပ်သံလိုင်းသည်ကုန်သည်အားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဒြပ်စင်တစ်ခုပေးသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ရက် ၂၀ အတွင်းပြိုကွဲခြင်းကဲ့သို့သောသင်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်အပိုင်းအခြားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်ကာလ ၂၀ အတွင်းအနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်လမ်းကြောင်းအောက်ပါညွှန်ကိန်းကိုသရုပ်ဖော်ပါမည်။
Buy: ပြီးခဲ့သည့် 20 ကာလ အတွင်း စျေးကွက်ပေါက်ဈေးသည် အမြင့်ဆုံး အမြင့်ဆုံးကို ကျော်လွန်နေပါသည်။
ရောင်းမည် ပြီးခဲ့သည့် 20 ကာလ အတွင်း စျေးကွက်ပေါက်ဈေးသည် အနိမ့်ဆုံး အနိမ့်ဆုံးကို ကျော်လွန်နေပါသည်။
ရွေ့လျားနေသောပျမ်းမျှ donchian ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုအားရက်ပေါင်း ၂၀ မှရက်ပေါင်း ၃၀၀ အတွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကာလတိုရွေ့လျားမှု၏ ဦး တည်ချက်သည်မည်သည့်လမ်းကိုခွင့်ပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
က short: ယခင်ကာလ၏ရွေ့လျားပျမ်းမျှနှုန်းသည်ရက် ၂၀ အတွင်းရွေ့လျားပျမ်းမျှထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
long က: ယခင်ကာလ၏ရွေ့လျားနှုန်းသည် ၂၅ ရက်ပျမ်းမျှပျမ်းမျှထက်နိမ့်သည်။
Forex သင်တန်း- Breakout Signal
'ခွဲထွက်ခြင်း' သည် စုစည်းမှု ခွဲထွက်ခြင်းအဖြစ် မကြာခဏ ရည်ညွှန်းသော ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်များသည် support band နှင့် resistance bands များကြားတွင်ပြောင်းသွားသောကြောင့် breakout ကိုအလယ်အလတ်ဗျူဟာတစ်ခုဟုယူဆသည်။ ပေါင်းစည်းခြင်းကန့်သတ်ချက်များနိမ့်သည်ဖြစ်စေမြင့်မားသည်ဖြစ်စေစျေးကွက်သည်ထိုကန့်သတ်ချက်များထက်ကျော်လွန်သွားသောအခါထွက်ပေါက်အချက်ပြမှုဖြစ်ပေါ်လာမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုပေါ်လာတိုင်းပြိုကွဲရန်လိုသည်။
ဤအားလပ်ချိန်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်လမ်းကြောင်းသစ်အသစ်ကိုစတင်တော့မလားဆိုသည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုအချက်ပြ breakout ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအဘယ်သူမျှမအာမခံချက်မရှိ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ငွေများကိုလုံခြုံစွာထားနိုင်ရေးအတွက်သင်ရပ်တန့်သောဆုံးရှုံးမှုကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
Forex သင်တန်း- အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
ရုတ်တရက် အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကနေ သင့်စျေးကွက်ရဲ့ အမှာစာတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့က တကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ငွေကြေးစျေးကွက်ကို လိုက်ပြီးနောက်၊ သတင်းသည် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် သင့်အား ကူညီပေးပါမည်။ သင်တစ် ဦး Forex ကုန်သွယ်သရုပ်ပြထွက်ကြိုးစားနှင့်စမ်းသပ် drive ကိုအဘို့သင့်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအတွေးအခေါ်များအချို့ကိုယူပြီးအားဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများအကြောင်းကိုပိုမိုနားလည်နိုင်သည်။
Forex သင်တန်း: အန္တရာယ်များ
ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်, အမြဲတမ်းအချို့သောအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်မှု Forex ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါစောင့်ကြည့်သင့်သည့်အန္တရာယ်အချို့။
အန္တရာယ် ၁ - သြဇာ
ဤ forex သင်တန်းတွင် အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ထိတွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ လွှမ်းမိုးမှုသည် သင်၏ ကုန်သွယ်မှုတွင် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နိုင်သည် - နည်းလမ်းကောင်းနှင့် ဆိုးသောနည်းလမ်း နှစ်မျိုးလုံး။ တစ်နည်းဆိုရသော် သင်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ပိုများလေ၊ သင်၏ အကျိုးခံစားခွင့်များ (သို့မဟုတ်) ဆုံးရှုံးမှုများ ကြီးမားလေဖြစ်သည်။ စွန့်စားရသည်မှာ သင်၏အမြတ်အစွန်းများကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ဆန့်ကျင်ပြီး သင့်ဆုံးရှုံးမှုကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ စတင်သည့်အခါတွင် သင်အသုံးပြုသည့် leverage ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းသည် ပိုကောင်းပါသည်။
အန္တရာယ် ၂ - အတိုးနှုန်း
နိုင်ငံ၏အတိုးနှုန်းကျဆင်းသွားပါကထိုနိုင်ငံ၏ငွေကြေးသည်အားနည်းလာလိမ့်မည်။ ငွေကြေးအားနည်းမှုကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှနှုတ်ထွက်သွားသည်။ ၀ ယ်လိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားနည်းခြင်းကြောင့်သင်ဟာမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောပြန့်ပွားမှုများကိုပိုမိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်, ငွေကြေးမြင့်တက်လာသောအခါ, ပိုပြီးအရည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငွေကြေးလေလေလေ၊ လူများများရင်းနှီးမြှုပ်နှံလေလေ၊ ပျံ့နှံ့မှု / မတည်ငြိမ်မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကာလအတွင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်စျေးကွက်တွင်ငွေလဲနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိနိုင်ပါ။ ဤသည်ကိုငွေပေးငွေယူအန္တရာယ်အဖြစ်လူသိများသည်။ ငွေလဲနှုန်းအတက်အကျဖြစ်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာများသောအားဖြင့်အချိန်ဇုန်များနှင့်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုကွာခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကြားကာလကြာရှည်လေလေအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်လေဖြစ်သည်။
ဘယ် Forex ပွဲစားကိုသုံးရမလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးသတိပြုမိခဲ့သည့်အတိုင်းအွန်လိုင်း Forex ကိုရောင်းဝယ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောယုံကြည်စိတ်ချရသောပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်သုတေသနမက်ထရစ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယင်းသည်အချိန်ကုန်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ အောက်တွင် forex ကုန်သည်များအသုံးပြုသောနာမည်ကြီးပွဲစားများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
AVATrade သည်ကျယ်ပြန့်သောကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုကမ်းလှမ်းသောကုန်သည်များနှင့်ကျော်ကြားသည်။ MT4 သို့မဟုတ် AVATrade ပလက်ဖောင်းကိုသင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေစျေးကွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ နည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်အဆင့်မြင့်ဇယားဖတ်ခြင်းကိရိယာများကိုသင်ရနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းတွင်ကော်မရှင်မရှိခြင်း၊ သိုက်များအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အဓိကအတွဲများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 1 pip အောက်အောက်သို့ပျံ့နှံ့သည်။
ယခု AvaTrade သို့သွားပါ
Forex သင်တန်း- နိဂုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex သင်တန်းသည်ရိုးရှင်းသော်ငြားလည်းအလွန်လျင်မြန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်း Forex Trading ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးများ၏မက်ခရိုစီးပွားရေးအခြေခံမူများကိုနားလည်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။ သင်အခြေခံကျသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ကုန်သွယ်မှုနည်းဗျူဟာကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အနေအထားတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုအောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ငွေအနည်းငယ်သာသုံးစွဲလိုသောကုန်သည်ဖြစ်လျှင်သင်ရှာနိုင်သည် တစ်ရက်ကုန်သွယ် နှင့်လွှဲကုန်သွယ်သင်တို့အဘို့ကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်ကြသည်။ ဤကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာ၏ကာလတိုသဘောသဘာဝအရ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရသော်လည်းပိုမိုမကြာခဏဆိုသလိုအခြေခံအားဖြင့်ဆိုလိုသည်။
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ ဤ Forex သင်တန်းသည် သင့်အား ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိသော Forex Trader တစ်ဦးအဖြစ် ခံစားလာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်ယခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ပြီး တသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်းများရရှိရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပြုတ်ကျရန် ကြောက်ရွံ့နေသေးပါက၊ သင့်ခြေထောက်ကို ရှာဖွေနေစဉ် Forex demo အကောင့်တစ်ခုမှ စတင်ခြင်းမှာ အမှားအယွင်းမရှိပေ။
Last Updated: မေလ 20th, 2022